Apple HomeKit Archives - SmartMe
Dom » Archive by sokajy "Apple HomeKit"
Apple HomeKit, Vaovao
Apple dia manakarama manam-pahaizana momba ny faharanitan-tsaina
ai, paoma, tsaina
Samy nanapa-kevitra ny hifindra any Apple ny mpahay siansa Samy Bengio, izay efa nifampiraharaha tamin'ny fampandrosoana ny haitao momba ny artifisialy artifisialy ao amin'ny Google. Bengio dia niasa tao amin'ny Google nandritra ny 14 taona mahery. Fiaingana taorian'ny 14 taona nandaoan'i Bengio ny orinasa avy tao Mountain View, ...
Ahoana no hanovako ny sary famantarana Apple ho bokotra iPhone fanampiny?
Manontany tena ianao ny fomba hamadihana ny sary famantarana Apple ho bokotra fanampiny amin'ny iPhone-nao? Mora be izany! Raha mampiasa ity smartphone ity ianao ary manana rindrambaiko iOS napetraka, dia misy vaovao tsara ho anao. Afaka maimaim-poana ianao ...
Apple HomeKit, Google Home, hevitra
Yale Smart Keypad - Ny fitendry ho an'ny trano
Ohatra, Lino, smart lock, Yale
Nahita zavatra isan-karazany tao an-tranoko aho. Nataoko automatique ny jiro, blinds, fanafanana ary nandritra ny fotoana ela dia te ho mandeha ho azy koa ilay hidy. Manana maromaro amin'izy ireo aho, ary farany dia nipetraka teo am-baravarako i Linus Smart Lock. Rahoviana...
Nipoitra ny fanavaozana ny mikirao praogramanao ho an'ny AirPods 2 sy Pro
rivotra pods, Airpods 2, airpods pro, paoma
Andro vitsy lasa izay, nivoaka ny kinova vaovao an'ny firmware ho an'ny AirPods 2 sy AirPods Pro. Jereo ny fomba hijerena raha nohavaozina ny headphone sy ny fomba hanandramanao hanafainganana ny fizotran'ny fanavaozana. Ahoana ny fomba hijerena raha manana fanavaozana izahay? Manamarina...
Amazon.pl dia manomboka mivarotra fitaovana Apple
30 Aprily 2021
Hatramin'izao, mba hividianana fitaovana Apple avy any Amazon, dia tsy maintsy nifindra tany amin'ny kinova amerikana an'ny tranonkala izahay. Saingy izao, ny zava-drehetra dia manondro fa hanana safidy tahaka izany isika any Polonina. Manomboka mivarotra amin'ny Amazon.pl i Apple, avy amin'ny ...
Nanomboka ny famokarana serial an'ny processeur Apple vaovao ho an'ny solosaina Mac
29 Aprily 2021
paoma, Mac, processeur
Ny MacBook Pro, nohavaozin'i Apple tanteraka, dia hiseho eny an-tsena amin'ny tapany faharoa amin'ity taona ity. Raha ny angom-baovao farany dia hanana seranana HDMI izy, mpamaky karatra fitadidiana ary mpampifandray MagSafe. Apple tsy miadana rehetra ...
Hahafahantsika mamoha ny iPhone amin'ny Face ID miaraka amin'i Apple Watchem
27 Aprily 2021
paoma, apple watch, Face ID, iPhone
Manomboka amin'ny Alatsinainy, miaraka amin'ny iOS 14.5 sy mijery OS 7.4, ny tompona iPhone miaraka amin'ny Face ID dia afaka mampiasa fomba vaovao hamohana ireo finday avo lenta. Noho izany, mampahatsiahy anao izahay ny fomba handefasana ilay endrika vaovao sy ...
Apple dia nandefa ny famokarana ny processeur M2
paoma, paoma m2, mpisolo toerana
Apple M2 dia processeur vaovao ho an'ny tsipika Mac. Ny famokarana ny puce dia efa natomboka, izay azo antoka fa mitondra antsika hanakaiky kokoa ny laharam-pahamehana amin'ireo Mac vaovao. Jereo izay efa fantatsika momba ny Apple M2 SoC. Manakaiky ny processeur vaovao, ...
Ny marika Wemo miaraka amina mpandrindra mpanohana HomeKit vaovao
26 Aprily 2021
belkin, homekit, Wemo, Wemo Stage Controller
Ilay mpanamboatra malaza amin'ny kojakoja an-trano marani-tsaina dia nanolotra ny mpanitsy azy vaovao antsoina hoe Wemo Stage Scene Controller. Ny fitaovana dia mifanaraka amin'ny HomeKit ary mamela anao hitantana seho enina samihafa. Ny famolavolana ny fanaraha-maso lavitra dia tena minimalista, ary ny ...
Apple HomeKit, Tutorials, hevitra, Fandraisana Xiaomi
Fampitahana ny sockets Smart - Aqara, EVE ary Meross
Aqar, Eva, meross
Faladia telo samy hafa! EVE, Aqara ary Meross! Iza amin'ireo no tsara indrindra? Iza amin'ireo no mora indrindra? Iza no avo indrindra? Ity ny fampitahana!